Iincwadi eziMnandi kunye neeNkqubo ze-Aljibra yokuFunda
I-Apps neencwadi ze-Learning Algebra
Kukho iintlobo zezifundo zezifundo, izikhokelo zokufunda, kunye nezicelo ezikhoyo kwi-intanethi ukuxhasa i-algebra yokufunda esikolweni esiphakeme nakwiikholeji.
Ukuba uqala ukuqala okanye ufuna ukuhlaziywa, kuya kufuneka ukwazi izakhono ezisisiseko zezibalo ezifana nokungongeza, ukukhupha, ukuphindaphinda nokuhlula. Imatriki yezinga eliphambili ibalulekile ngaphambi kokuba uqale. Ukuba awunayo le zakhono, kuya kuba nzima ukujamelana neengcamango eziyinkimbinkimbi ezifundiswe kwi-algebra.
Enye yezinto ezinzima kakhulu ekuxazululeni i-algebra equation njengomqali owaziyo ukuba uyaqala kuphi. Ngenhlanhla, kukho umyalelo othize wokuxazulula le ngxaki, "Nceda uxolele umntanami othandekayo uSally" okanye "i-PEMDAS" ngumnumzane onceda xa ekhumbula umyalelo. Okokuqala, ngaba nawuphi na umsebenzi wemathematika kubazali, uze uvelise, uze ukwandise, uze udibanise, udibanise, kwaye ekugqibeleni ususe.
Kwi-algebra, kuyaqhelekileyo ukusebenzisa amanani amaninzi. Enye into nge-algebra, iingxaki zakho zinokuthi zifike ixesha elide kwaye zikhutshwe. Ngenxa yoko, kulungile ukwazi indlela yokugcina iingxaki ezide zihleliweyo.
I-Algebra yilapho abafundi baqaliswa khona ngcamango engacacanga "x," into engaziwayo.
Nangona, abantwana abaninzi baye basombulula "x" kuba isifundo sokufundela esineengxaki ezilula zamagama ezibalo. Umzekelo, cela umntu oneminyaka emi-5 ubudala, "Ukuba uSally uneswidi enye kwaye unamacandi amabini. Impendulo "x." Umehluko omkhulu kunye ne-algebra kukuba iingxaki ziyinkimbinkimbi kwaye kunokuba kubekho enye engatshintshiyo.
Iimfuno Ezinkulu ze-Algebra
UJoseu Luis Pelaez Inc / Iimfono zeMifanekiso / Getty Izithombe
Ezinye zezona zixhobo ezilungileyo zokufunda i-algebra zidibeneyo. Iiprogram zinikeza ukuqeqeshwa kwaye abanye banokuba neendlela zokufunda zezifundo zokufunda. Uninzi lwazo luxabisekile kwaye lunokuba novavanyo lwamahhala.
Enye yezona zixhobo ezilungileyo kakhulu yiProgram yeWolfram. Ukuba awukwazi ukufumana umqeqeshi, oku kungenokuba ngumsizi wakho ongcono kwiimpawu ze-algebra ezikhombisayo.
Ngaba sele uwathatha iAlgebra kodwa ukhohliwe into enkulu? "I-Algebra eSebenzayo: Isikhokelo sokuziThela" senu. Incwadi idibanisa amanani kunye nama-polynomials; ukutshintshisa ama-algebraic expressions; indlela yokusingatha amaqhekeza e-algebraic; iziboniso, iingcambu, kunye neerdicals; equation and fractional equations; imisebenzi kunye negrafu; equation quadratic; ukungalingani; umlinganiselo, inani kunye nokuhluka; indlela yokusombulula iingxaki zegama, kunye nokunye.
"I-Algebra Impumelelo Ngama-20 Imizuzu Ngosuku" luyisikhokelo sokufundisa ngokwamakhulu emisebenzi efanelekileyo. Ukuba unako ukusindisa imizuzu engama-20 ngosuku, unokukwazi kakuhle indlela yakho yokuqonda i-algebra. Ukuzibophezela ixesha kuyingxenye ebalulekileyo yempumelelo ngale ndlela.
"Akukho-Nonsense Algebra: Icandelo leSikhewu soBugcisa boLwazi lweMathematika oluPhambili" lukukuba wena ufumana ubunzima ngeengcamango ze-algebraic. Indlela yokunyathela ngeendlela kunye nemigaqo ecacileyo necacileyo enokuqinisekileyo ukunceda nangona umfundi ochaphazelekayo wesibalo.
Landela kunye nesisombululo esiphezulu kwiimpawu eziqhelekileyo ze-algebra kwi "Maran Illustrated Effortless Algebra." IJargon ichazwa kwaye indlela yokunyathela ngamanyathelo yenye yezona zinto zifumanekayo. Le ncwadi ngokwenene kumntu ofuna ukufundisa ngokwabo i-algebra ukususela ekuqaleni kwinqanaba eliphambili. Kucacile, icacile, kwaye ibhalwe kakuhle.
"Easy Algebra Isinyathelo-ngeNyathelo" ifundisa i-algebra ngendlela yencwadana yefantasti. Abalinganiswa bebali baxazulula iingxaki ngokusebenzisa i-algebra. Abafundi bafumanisa indlela kunye nezizathu zokulinganisa, iinombolo ezingekhoyo, iimbonakalo, iingcambu kunye nenani lokwenene , amazwi algebraic, imisebenzi, iirafu, ukulinganisa kwe-quadratic, iipolomomiki, iimvume kunye nokudibanisa, izibalo kunye nezigqibo, ukufakelwa kwemathematika, kunye namanani okucinga. Le ncwadi inemifanekiso engaphezu kwe-100 kunye nemifanekiso.
7 Amanyathelo okwenziwa kweMathematika engcono
Iincwadi Ezinkulu zokufundisa nokubala nokuQaphela iNani
IBakala lesiBili iMatriki: Fumana abantwana bakho Ukuxazulula iingxaki zegama leMenyu
Imisebenzi yeMatriki yoSuku lwe-Valentine
Ayikwazi ukufaka iKickflip? Konke Kubekwa kweenyawo
Iimpawu ezi-10 eziphambili ze-Pop ze-60s